अब सरकारले निषेधाज्ञाका लागि दिएको छुट बन्द गर्ने, किन फेरि बन्दा गर्ने | Khabar Sadan खबर सदन
Home समाचार अब सरकारले निषेधाज्ञाका लागि दिएको छुट बन्द गर्ने, किन फेरि बन्दा गर्ने
अब सरकारले निषेधाज्ञाका लागि दिएको छुट बन्द गर्ने, किन फेरि बन्दा गर्ने
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित दुई संस्थाले सरकारले निषेधाज्ञाका लागि दिएको छुट बन्द गरेका छन् । मंगलबारदेखि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र बुधबारदेखि साल्ट ट्रेडिङले खाद्यान्नमा उपभोक्ताहरुलाई दिँदै आएको २० प्रतिशत छुट बन्द गरेका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित देशका अधिकांश जिल्लामा जारी निषेधाज्ञामा केही खुकुलो भएसँगै २० प्रतिशत छुट रोकिएको खाद्य कम्पनीले जनाएको छ । गत वैशाख २० गतेदेखि देशभर रहेका ४८ वटा बिक्री काउन्टरबाट दिइएको छुट मंगलबारदेखि रोकिएको बताइएको छ ।
कम्पनीले करीब डेढ महिनाको अवधिमा रु एक करोड ३८ लाखभन्दा बढीको छुट दिइएको छ । करीब ६ करोडभन्दा बढीको कारोबार हुँदा उक्त रकम छुट दिइएको हो । छुट अवधिमा १२ हजार ८८ क्विन्टल चामल बिक्री गरिएको छ ।
यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले समेत बुधबारदेखि छुट रोकिएको जनाएको छ । दुई कम्पनीले छुट दिँदा उपभोक्ताको भीड बढेको भन्दै गत वैशाख २५ गतेदेखि बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म मात्र खाद्यान्नमा छुट दिएका थिए ।
Previous articleकुन जिल्लामा निषेधाज्ञा नै छैन र कुन जिल्लामा खुकुलो छ? कता च्याप्प बन्दा त छैन नि?
Next articleकुन जनावर उफ्रिन सक्दैन? के तपाईंलाइ थाहा छ, छैन भने हेर्नुहोस